यस्तो छन् ८५ प्रतिशत पानी पाइने लौका खानुका फाइदै फाइदाहरु, जानी राखौ
अगस्ट 30, 2019 अगस्ट 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment	डा. राम बहादुर बोहरा, लौका
लौकालाई शायद नचिन्ने को होला ? गर्मी महिनामा पाइने सिजनल तरकारी लौकाका फाइदाहरुबारे हामी शायद अनभिज्ञ नै छौँ । लौकामा अत्यधिक मात्रामा पानी पाइन्छ । यसमा ८५ प्रतिशत त पानी नै हुन्छ । यसमा हुने पोटासियमले हाम्रो प्रेसर कम राख्न र हाम्रो शरीरमा हुने इलेक्ट्रोलाइटलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ ।
लौकामा भिटामिन सी, भिटामिन बी, भिटामिन के, भिटामिन ए, भिटामिन ई, फलाम, फोलेट र म्यानग्यानीज जस्ता खनिज पदार्थहरु पनि पाइन्छन् । खासमा लौका भिटामीन सीको एउटा मुख्य स्रोत नै हो । २५० ग्राम लौकाबाट २०,२५ मिलिग्राम जति भिटामीन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लौकाको सेवनले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई ठीक गर्छ र मस्तिष्कको कार्य सञ्चालनमा पनि सहयोग गर्दछ । यति मात्र होइन, भिटामीन सी र यसमा पाइने जिंकले चाउरीपना र बुढ्यौलीपनाबाट पनि जोगाउँछ र यही जिंकले नशा बलियो बनाउने र रुघाखोकीबाट सुरक्षा दिन्छ । यसमा पाइने भिटामिन बी ले कपाल फुल्न दिँदैन ।
पचाउन एकदम नै सजिलो हुने भएकाले, गर्मी महिनाको लागि यो अत्यन्तै उपयुक्त खानेकुरा हो । लौकामा हुने फाइबरले पाचन प्रक्रिया सजिलो बनाउने भएकाले कब्जियत, पाइल्स्, पेट ढुस्स हुने, वाकवाकी लाग्ने, आदि जस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति दिन्छ । लौकामा हुने पानी र फाइबरले आन्द्रा सफा राख्न र पाचनमा सजिलो बनाउन सहयोग गर्छ ।
लौकाको जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । लौकाको जुस बनाउन सजिलो भएकाले यसको अत्यधिक सेवनका लागि जुस बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ । मधुमेहका बिरामीहरुको चिनीको मात्रा र ब्लड प्रेसर सन्तुलनमा राख्न पनि लौकाको जुसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पिसाब नलीमा संक्रमण भएका, युरिक एसिड भएकाहरुका लागि यो झनै फाइदाजनक छ ।
आजकाल लौकाबारे गलत कुराहरु पनि सुन्नमा आएको छ । लौकाको नियमित सेवन गर्नाले व्लड प्रेशर कम हुन्छ खानुहुदैन । तर यो गलत हो किनभने यस्मा खराब तत्व मात्र होइन शरीरलाई चाहिने आवश्यक भिटामिन हुनाले बढी भएको ब्लड प्रेशर कम गराउछ भने कम भएकालाई लेवलमा ल्याउने काम पनि गर्दछ ।
जुस बनाउनका लागि लौका ताछ्नुहोस्, टुक्राटुक्रा बनाएर काट्नुहोस् र ब्लेण्डरमा ब्लेण्ड गर्नुहोस् । यसमा मरिच, नुन र पुदिनाको पात मिसाउनुहोस् । एक चम्चा अदुवाको रस र कागती निचोरे र थोरै रस हालेर जुस पिउनुहोस् यसवाट फाइदै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ । हप्तामा कम्तीमा ३ पटक लौका खाने गरौं भन्ने मेरो राय छ ।
← भगवान कृष्णबारे जान्नैपर्ने ८ रहस्यहरु
कुन समयमा यौन सम्पर्क राख्दा गर्भ बस्छ ? →
पित्तथैलीको पत्थरी र यसको उपचार
नोभेम्बर 5, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2
भुल्ने बानीलाई यसरी गर्नुहोस् ठिक
जुन 26, 2019 जुन 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
One thought on “८५ प्रतिशत पानी पाइने लौका खानुका फाइदै फाइदाहरु”
Pingback:	यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि बेथेको साग खानुका फाइदाहरू, जानी राखौ